Madaxweynaha dalka Tanzania, John Magufuli, oo shaqaalaha dalkiisa caafimaadka uga digay isticmaalka tallaalka Covid-19. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweynaha dalka Tanzania, John Magufuli, oo shaqaalaha dalkiisa caafimaadka uga digay isticmaalka...
Madaxweynaha dalka Tanzania, John Magufuli, oo shaqaalaha dalkiisa caafimaadka uga digay isticmaalka tallaalka Covid-19.
Madaxweynaha dalka Tanzania, John Magufuli, ayaa shaqaalaha caafimaadka uga digay isticmaalka tallaalka Covid-19.
Isagoo aan wax caddeyn ah soo bandhigin ayuu sheegay in tallaalku uu dhibaato u keeni karo shacabka.
“Wasaaradda Caafimaadku waa in ay feejignaato, waa inaysan ku degdegin tallaalkan iyagoo aan cilmibaaris ku sameynin, tallaal kasta annaga muhiim nooma aha, waa inaan ka taxadarno,” ayuu yidhi Mr Magufuli.
“Tallaalku waa khatar. Haddii uu ninka cad la imaan karo tallaal, wuxuu mar hore u heli lahaa Aids-ka, kansar-ka iyo qaaxada.”
Wariyaha dhinaca caafimaadka ee BBC-da, Philippa Roxby, ayaa sheegtay in tallaalka lasoo saaray uu yahay mid tijaabooyin maray kumannaan ruuxda lagu tijaabiyay ka hor inta aan la sharciyeynin. Hayadaha sharciyeynta ayey sheegtay in ay u mareen tallaabo kasta oo lagu xaqiijinayo in tallaalku uusan bulshada waxyeelleynin.
“Ujeeddada loo soo saaro tallaalku waa in naf lagu badbaadiyo, iyadoo dadka laga ilaalinayo cudurrada dilaaga ah,” ayey tidhi.
Madaxweyne Magufuli ayaa dadka reer Tanzania ku boorriyay inay sii wadaa taxaddarka, isagoo sheegay in ducooyinka iyo dawooyin dhaqameedka ay yihiin sida kaliya ee loola tacaali karo fayraska corona.
“Dalal badan xayiraad ayey ku jiraan, laakiin Tanzania ma qorsheyneyso xayiraad, waligeen masoo saari doonno amar waddanka lagu xirayo, sababtoo ah ilaaheenna wuu nool yahay wuuna sii wadi doonaa inuu na ilaaliyo.” Ayuu yidhi.
Madaxweynahan, oo ah masiixi, ayaa sanadkii lasoo dhaafay ku dhawaaqay in dalkiisa uu ka dhammaaday Covid-19. Hase yeeshee kama uusan hadlin walaaca ay kaniisadda masiixiyiinta kasoo saartay dhimashada cudurka ee kusoo badaneysa magaalooyinka dalkaas.
“Kaddib markii si buuxda loo xakameeyay faraska sanadkii lasoo dhaafay, Tanzania waxay hadda wajaheysaa mowjad labaad oo fiditaanka fayraska ah,” ayaa lagu yidhi bayaan Talaadadii kasoo baxay kaniisadda.
Waddankeennu ma aha jasiirad. Waan ku khasban nahay inaan taxadarno oo aah Ilaah ka barinno sidii uu nooga badbaadin lahaa cudurka safmarka ah.” Ayaa lasii raaciyay hadalka kasoo baxay kaniisadda.
Dabayaaqadii isbuuca, Baadari Yuda Thadei Ruwaichi, oo ku sugan magaalada Dar es Salaam, ayaa yidhi: “Covid nagama dhammaanin, Covid wali wuu nala joogaa. Yeynaan taxaddar yaraan sameynin, waa inaan nafteenna ilaalinno, gacmihiinna ku dhaqa biyo iyo saabuun. Waa inaan sidoo kale dib u billowno xirashada maaskarada.”
Madaxweyne Magufuli ayaa dhanka kale aan ka hadlin war kasoo baxay dowladda Denmark oo sheegtay in labo ka mid ah muwaadiniinteeda – oo dhawaan booqday Tanzania – laga helay nooca cusub ee cudurka Covid-19 ee kasoo billowday dalka Koonfur Afrika.
Taas baddalkeeda wuxuu muwaadiniinta dalkiisa ee dibadda u safra ku eedeeyay in ay “u keenaan nooca qalaad ee corona”.
Dowladda Tanzania ayaa warbixinnada ku saabsan heerka uu waddankaas ka marayo corona joojisay bishii June ee sanadkii lasoo dhaafay.
Previous articleBooliska Lubnaan oo xaqiijiyay Qasaare soo gaaray Ciidamada Dalkaasi kadib bananabaxayaal Caraysan..
Next articleDaraasad cusub oo khatar ku tilmaantay isticmaalka Baraha Bulshada
Safaaradda Mareykanka oo mar kale twitter-ka soo dhigtay Fariin ku socota...
Safaaradda Mareykanka ay ku leedahay Muqdisho ayaa twitter-ka soo dhigtay qoraal ay ugu baaqeyso madaxda dowladda iyo dowladaha xubnaha ka ah iney si dhaqso...